Maitiro ekumisikidza iyo ECG yeApple Tarisa kuSpain nedzimwe nyika | Ndinobva mac
Mushure memakuhwa mazhinji apfuura umo maitove akafungidzirwa kuti vakomana veCupertino vanogona kuvhura iyo nyowani ECG (electrocardiogram) basa pakupedzisira uye nemazuva mashoma mushure mechinyorwa chishandiso ichi chinoiswa muApple Watch Series 4 kuSpain nedzimwe nyika dzakaita seHong Kong neEuropean Union.
Iye zvino tave kuita basa iri iro rinotibvumidza isu kurekodha mutinhimira uye kusimba kwemasaini emagetsi anoita kuti moyo urove, zvese zvichibva pakurinda kwedu. Basa rakatangwa muUnited States mwedzi mishoma mushure mekumisikidzwa zviri pamutemo kwewachi uye sezvataona nekufamba kwenguva, iri basa ratoponesa hupenyu. Nhasi tichaona chii, inoitwa sei uye ino shanda sei ECG, Usapotsa.
1 Chii chaizvo chiri ECG?
2 ECG inotsiva kushanya kwachiremba nyanzvi?
3 Ini yangu Apple Watch inotsigira ichi chimiro?
4 Ndinoita sei kuti ndiite iyo ECG pane yangu Apple Watch Series 4?
5 Yangu yekutanga ECG paApple Watch
Chii chaizvo chiri ECG?
Electrococardiogram haina chimwe chinhu kunze kwekurekodha kwechiitiko chemagetsi chemoyo wedu, saka kana moyo wedu uchirova unoburitsa mafungire emagetsi ayo anokonzera kubata ichi chikamu chakakosha yemuviri wedu uye zvikamu zvipi zvacho zvinofanirwa kuzviita kupomba ropa.
Kune hupenyu hwevanhu, zvakakosha kuti uve neECG yakajairika pasina zvimiro zvisina kujairika uye izvi zvinogona kuyerwa zvirinani nemuchina unowedzera ma electrode mumuviri wedu wese, uyozve wakabatana nekombuta inoverenga ruzivo uye inogadzira girafu. yemasimba emagetsi aya. Kana chiremba akatarisa EKG, vanogona tora ruzivo rwakadzama nezvekuti moyo wako mutinhimira unoshanda sei uye tarisa zvisizvo izvo zvinogona kukonzera kukundikana kwenhengo iyi.
ECG inotsiva kushanya kwachiremba nyanzvi?
Kwete uye zvachose kwete. Tinofanira kunyatsojekesa kuti kushanya kwachiremba kana tatove nechikumbiro ichi che iPhone yedu neApple Watch havakwanise kuona chirwere chemwoyo hapana mhaka uye zvakakosha kuti uve akajeka nezve aya mapoinzi usati wafunga kuti imwe inodzivirirwa neiri basa reApple chishandiso. Kana iwe uchimbonzwa kurwadziwa, kumanikidzwa kana kuomeswa muchipfuva, kana chero chiratidzo cheicho chingave chirwere chemwoyo, wachi yako inogona kukuyambira nezve izvi zvisina kunaka asi zvakakosha kuti ubate masevhisi ezve emergency.
Kuverenga uku hakukwanise kuona iro rinogona kunge rakavhara ropa, sitiroko uye zvimwe zvinhu zvine chekuita nemoyo, zvinosanganisira neBP, moyo kutadza, hypercholesterolemia kana mamwe marudzi eArthythmias enhengo yakakosha yehupenyu. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti zvive pachena kuti basa iri rakanakira kushandiswa kweruzivo asi hapana chiitiko chinotsiva kushanya kwachiremba kana paine matambudziko nemoyo. Apple inotiyambirawo kuti iyo ECG app Iyo haina kuitirwa, uye haina kukodzera, vanhu vari pasi pezera re22.
Ini yangu Apple Watch inotsigira ichi chimiro?
Uyu ndeimwe yemibvunzo yatakabvunzwa zvakanyanya pakaziviswa basa rewachi uye mune iyi mhinduro ndeyekuti tinoda michina miviri kuti tikwanise kunakidzwa nekuverenga kweECG uku. Vanoda 4mm kana 40mm Apple Watch Series 44 chero mhando (mutambo kana simbi) ine watchOS 5.1.2, yakabatana ne iyo iPhone 5s kana yepamusoro ine iOS 12.1.1 kana yepamusoro.
Mamwe ese emaApple akangwara anosiiwa kunze kweiri basa sezvo vasina magetsi emagetsi emoyo pazasi pechigadzirwa pachacho, asi Apple inowedzera iyo zviziviso zveyakajairika mutinhimira mune ino gadziriso zvakare yeApple Watch Series 1 zvichienda mberi. Iri basa zviri pachena kuti harisi ECG sezvo Apple Watch Series 4 inogona kuita, asi zvakare zvinonakidza kuona arrhythmias iyo inogona kunge iri nekuda kweatrial fibrillation.
Ndinoita sei kuti ndiite iyo ECG pane yangu Apple Watch Series 4?
Zviri nyore kwazvo kumisikidza iri nyowani basa iro richangobva kutangwa muWatchOS 5.2 yevashandisi muSpain nedzimwe nyika dzeEU. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kurodha pasi iyo yekuvandudza pane yedu wachi kubva kuApple Watch app. Rangarira kuti kumisikidzwa kweshanduro nyowani zvinoda kuti iyo Apple Watch ive neinosvika 50% bhatiri, kuti iri mukati meiyo iPhone uye kuti isu tine wachi yakabatana nechaja. Chaizvoizvo iyi vhezheni itsva haiwedzere dzimwe nhau kupfuura iko kusvika kweECG, saka huremu hwayo hautomboita 457 MB asi iwe unotoziva kuti kurodha pasi uye kumisikidza zvinoenderana nezvinhu zvakawanda saka zviri nani kuti usamhanye kana uchigadzirisa.
Kana tangova neiyo nyowani vhezheni yakaiswa isu tinongofanirwa kudaro shandisa iyo Yekushandisa kunyorera uye mune iyo Zvirongwa zveMoyo application tinowana iyo nyowani ECG basa ratingaite. Tichafanirwa kuwedzera zuva rekuzvarwa uye tinya Enderera kana iwo ruzivo rweiri basa rwaverengerwa. Paunopedza, unenge watove nebasa reECG rakagadzwa pawatch yakanangana newachi yako sezvimwe zvese zvinoshandiswa zviripo. Tinogona kudzvanya pane korona kuti tiwane maapplication uye tinya pairi kuti tishandise pese patinoda.
Yangu yekutanga ECG paApple Watch
Ichi ndicho chinhu chatave kuda kuita pawachi yedu kwenguva yakareba sezvo iri rinoyevedza basa ratisingakwanise kuve naro nemitemo yeEuropean pane iyi mhando yedata asi ikozvino iri kushanda uye tinogona kuishandisa pane yedu wachi. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuchinjisa wachi zvakanaka kune yedu ruoko (kuti haina kusununguka kana pamusoro pebono repamaoko) iyo vhura iyi purogiramu yemwoyo izvo zvatinazvo pane wachi uye isa munwe wako paDhijitari Korona kwemaminitsi makumi matatu anenge. Pakarepo, wachi ichaverenga sinus mutinhimira, atrial fibrillation, yakakwira kana yakaderera kurova kwemoyo uye kunyangwe iyo isinganzwisisike mhedzisiro (chinova mhedzisiro isingakwanise kuiswa murejista nekuda kwekurega maoko achizorora kana zvimwe zvinhu).
Tinofanira kudzikama, kugara uye kufema zvakadzikama, hazvibatsiri kuita ECG mushure memitambo kana chero kuyedza sezvo kuverenga kungave kusiri iko. Tinogona zvakare kuchengetedza ruzivo rwekuverenga uku muHutano app ye iPhone yedu uye tinogona kana kutumira iyi data kune ruzivo rwezvinangwa kune chiremba wedu neemail kana AirDrop.
Kana ECG yaitwa chete, wachi yacho pachayo inotumira chiziviso ku iPhone iyo inotiratidza mhedzisiro yekuverenga uku uye inotiyeuchidza kuti ruzivo rwunoratidzwa runongodzidzisa, saka zvinokurudzira kuti iwe Kana iwe usinganzwe zvakanaka kana iwe uchinzwa kurwadziwa kwepfupa, enda nekukurumidza kwachiremba wako kana kuzivisa vevashandi vechimbichimbi kuitira kuongororwa zviri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekumisikidza iyo ECG yeApple Tarisa kuSpain nedzimwe nyika
Ini ndatoita electro mushure mekuvandudza.
Apple inoburitsa macOS Mojave 10.14.5 Beta 1 yevagadziri